Fanazavana entin'ny Praiminisitra, Lehiben'ny Governemanta Mahafaly Solonandrasana Olivier mahakasika ny didim-panjakana nivoaka tamin'ny Filan-kevitry ny Minisitra amin'ny fanatsarana ny tambin-karaman'ireo tomponandraikitra eo anivon'ny kaominina eto Madagasikara | Primature
Fanazavana entin’ny Praiminisitra, Lehiben’ny Governemanta Mahafaly Solonandrasana Olivier mahakasika ny didim-panjakana nivoaka tamin’ny Filan-kevitry ny Minisitra amin’ny fanatsarana ny tambin-karaman’ireo tomponandraikitra eo anivon’ny kaominina eto Madagasikara
1 mars 2018 16 mars 2018
Mahazoarivo 01 martsa 2018- Nandritra ny Filankevitry ny Minisitra tamin’ny 27 febroary 2018 no nivoaka ny didim-panjakana izay mametraka ny fanatsarana ny tambin-karaman’ireo tomponandraikitra isan-tsokajiny eo anivon’ny kaominina eto Madagasikara. Nitondra fanazavana momba izany didim-panjakana izany ny Praiminisitra, Lehiben’ny Governemanta, Mahafaly Solonandrasana Olivier. Zava-dehibe tokoa mantsy ity fivoahan’ny didim-panjakana ity satria efa ela no niandrasan’ny tomponandraikitra eo anivon’ny kaominina mahakasika izany fampiakarana ny tambin-karama izany, izay efa tsy mifanaraka amin’ny toetrandro. Nanambara ny Praiminisitra fa “Nihaino ny Fitondram-panjakana ary noho ny toromariky ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina dia tafavoaka soa amantsara io didim-panjakana io”.
Misy sokajy maro ny kaominina eto amintsika izay ahitana ny kaominina « hors catégorie » dia ny kaominina andrenivohitry Antananarivo; ny kaomininina ambonivohitra “1ère catégorie”, “2ème catégorie” ary ny kaominina ambanivohitra “1ère catégorie” sy “2ème catégorie”. Ao anatin’ireo kaominina ireo dia efa voafaritra mazava ny tambin-karamany. Mahakasika ny fahefana mpanatanteraka eo anivon’ny kaominina, ny mpanolontsainan’ny kaominina, ny tomponandraikitra ao anatin’ny kabinetran’ny kaominina io didim-panjakana io. Heverina fa hahavaha ny olana ateraky ny tsy fahampiana teo amin’ny tambin-karama izay nandrasan’ireo tomponandraikitra ity fivoahan’ny didim-panjakana ity.
Teo anatrehan’izany dia niantso ny ben’ny tanàna sy ny mpanolontsaina mba handray fanapahan-kevitra izay tandrify ny kaominina tsirairay ny Praiminisitra Mahafaly Solonandrasana Olivier: “mirary ireo ben’ny tanàna sy ireo mpanolontsaina mba hahay hifehy ny teti-bolany satria ao anatin’izany no ahafahany mandrindra ny fanomezana ireo tambin-karama izay nasiana fanamboarana. Aoka tsy hieritreritra zavatra tsy araky ny kaominina. Araka izany, tsy tokony hihoatra amin’izay voalazan’ny lalàna manan-kery rehefa manapaka ny mpanolontsainan’ny kaominina fa ny efa voafaritry ny lalàna no tapahina mahakasika izay tambin-karama izay. Aoka tsy hanao zavatra mihoatra izay zaka ny kaominina na eo aza ny didim-panjakana nivoaka fa izay zaka ihany no tanterahina na eo aza ny hetaheta hanatsarana ny tambin-karama ».
« Miarahaba amin’ny alalan’ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina sy ny Fitondram-panjakana ny tenako ho an’ireo kaominina amin’ny fivoahan’ny didim-panjakana izay heverina fa hitondra ainga vao eo amin’ny fanatsarana ny fomba fiasa eo anivon’ny kaominina tsirairay avy eto Madagasikara » hoy hatrany ny Praiminisitra Mahafaly Solonandrasana Olivier.
← Fitokanana fotodrafitrasa ao amin’ny Ivotoerana Malagasy momba ny Vaksiny Veterinera na ny « Institut Malgache des Vaccins Vétérinaires » (IMVAVET)
Visite de courtoisie du Directeur des Affaires Africaines auprès du Ministère Fédéral Allemand des Affaires Etrangères à Mahazoarivo →